🥇 ▷ OPPO A11x cusub: afar muraayadood, baytar weyn iyo kuwa ku hadla stereo ✅
OPPO A11x cusub: afar muraayadood, baytar weyn iyo kuwa ku hadla stereo
In kasta oo OPPO uu si aad ah ugu sharraxayo mobiladeeda Reno, haddana wuxuu leeyahay taxane kale oo badan sida taxanaha A, oo aan joojinaynin ku guuleysiga kuwa cusub. Haddii aan dhowaan la kulanay OPPO A5 (2020) iyo OPPO A9 (2020), maanta waa xilligii uu inaadeerkiis u ahaa Shiinaha, cusub OPPO A11x.
OPPO A11x waa garoon dhexdhexaad ah, oo leh qiimo la isku habeeyay, laakiin wuxuu u taagan yahay batterigiisa weyn 5,000 oo MAh oo ay ka mid yihiin afar muraayad gadaal ah oo kamarad leh 48 megapixel sensor weyn ah. Aynu si qoto dheer u aragno waxa ay na siiso.
OPPO A11x xaashida macluumaadka
6.5 “HD + LCD
Cabirrada iyo culeyska
OS 6 midab
Laga bilaabo 230 euro oo la beddelo
Afar muraayadood iyo 48 MP
Iyada oo leh shaashad LCD ah 6.5 inji leh HD + xalin oo aan u dhicin qaab dhibic, OPPO A11x waxay ku adkaataa inay istaagaan suuq ay ku dhowaad dhammaan baandooyinka qiimaha ay wataan gole leh xallin dheeri ah. Taabadalkeed, OPPO waxay dooratay dabacsanaan weyn ee awoodeeda sawir.
In kasta oo marka ugu horeysa muuqata ay u muuqato in OPPO A11x ay leedahay kamarad gadaal ka leh saddex muraayadood, runtii afar baa jira. Midda ugu weyni waa 48 megapixels leh aperture of f / 1.8, laakiin sidoo kale waxay leedahay xagal ballaadhan oo ah 8 MP, dareemayaal qoto dheer ah 2 MP iyo dareema kale oo dheeraad ah oo ah 2 MP kuwaas oo astaamihiisu aysan ka beddelin.
Dhammaantiin waxay wada bixiyaan dabacsanaan weyn marka la qaadayo sawirada, iyo sidoo kale hab Habeen ah marka iftiinka uusan ku filnayn. Diidmada kamarada hore, waa 16 megapixel sensor leh f / 2.0 aperture.
5,000 mAh batteriga iyo kuwa ku hadla stereo
Awooda OPPO A11x waa masuuliyada Snapdragon 665, oo ay la socdaan 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB kaydinta. Nidaamka hawlgalka waa Android 9 Pie oo hoos yimaada OPPO lakabka u gaarka ah, ColorOS 6.
Dhinaceeda, baytarigu wuxuu leeyahay a awood balaaran oo ah 5,000 mAh, in kasta oo ay qasab kugu tahay inaad yeelato xoogaa samir ah si aad u xirato maxaa yeelay ma jiro wax war ah oo ay ku jiraan taageerada nooc kasta oo rar deg deg ah ah. Ugu yaraan waxay leedahay isku xirka USB-C.
Xaqiiqada cajiibka ah ee OPPO A11x ay ku faani karto waa inay lahaato kuwa ku hadla stereo, oo ku yaal dusha sare iyo hoose ee garoonka iyo in la helo codka Dolby Surround Hi-Res Audio.
Aayadaha, qiimaha OPPO A11x
OPPO A11x ayaa horeyba looga iibiyay Shiinaha qiimo dhan 1,799 yuan, qiyaastii 230 euro oo la beddelo. Waa nooc keliya oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo kayd ah, oo lagu heli karo laba midab: guduud iyo buluug.
La wadaag OPPO A11x cusub: afar muraayadood, baatar weyn iyo kuwa ku hadla stereo